Duqa Muqdisho ”Waxaa jira Shaqsiyaad liddi ku ah amniga ee hala soo qabto” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Duqa Muqdisho ”Waxaa jira Shaqsiyaad liddi ku ah amniga ee hala soo...
Duqa Muqdisho ”Waxaa jira Shaqsiyaad liddi ku ah amniga ee hala soo qabto”
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa sheegay in amniga Guud ee dalka uu yahay mas’uuliyad guud looga baahan yahay qof walba oo Soomaali ah.
“Qofka burcadka yaa loo damqanin, haddii dhaqankiisa xun yahay waa ka tagay, dhibaatada uu ku keenayo ayaa ka badan midka bulshada u keenayo, dadka ka dambeeya dhibaatooyinkaas hala soo gaarsiiyo hey’adaha amniga iyo maxkamahada hala soo gaarsiiyo dalka dowlad iyo garsoor ayuu leeyahay”ayuu yiri Duqa magaalada Muqdisho.
Cumar Filish ayaa sheegay si looga gudbo amni darrada ka jirta degmada Kaaraan ee Gobolkan Banaadir in Bulshada la yimaadaan aragti lagu sugi karo amniga iyo inay si wadajir ah uga qeyb qaataan ka hortagga Amni darrada ka geysanaya degmada Kaaraan.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hadalkiisa waxaa uu daba socdaa, kadib markii Amni darro baahsan ay ka dhacday degmada Kaaraan, isla markaana dadka Shacabka ah ay cabasho u soo gudbiyeen Maamulka Gobolka Banaadir.
hala soo qabto
shaqsiyaad Liddi ku ah Amniga